Dagaal ka dhacay magaalada cadaado - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDagaal ka dhacay magaalada cadaado
January 17, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Dagaal ka dhacay magaalada cadaado. [Sawirka: Archive]
Cadaado-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada NISA iyo ciidamada booliiska Galmudug ayaa maanta oo Talaado ah ka bilowday gudaha magaalada Cadaado, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Sida ay ilo-wareedyadu sheegeen, dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamada NISA isku dayeen in ay joojiyaan kulan uu lahaa baarlamaanka Galmudug kuwaasoo doonaya in ay madaxweyne cusub doortaan kadib markii ay cayriyeen madaxweynihii.
Dadka deegaanka ayaa khadka taleefoonka ugu sheegay warsidaha Puntland Mirror in ay maqleen rasaasta qoryaha.
Wali ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Asbuucii lasoo dhaafay, xildhibaanada Galmudug ayaa xilkii ka qaaday Madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed, iyaga oo ku eedeeyay waxqabad la’aan, laakiin waa uu diiday in uu aqbalo xil ka qaadistaas.
November 23, 2016 Murashaxa madaxweynaha Soomaaliya Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ka digay macquulnimada in doorashada madaxweynaha ay dib u dhacdo